संसारकै ठूलो टाउको भएका बालकको शल्यक्रिया, ४ लिटर पानी निकालियो
पुस २५, २०७३ सोमवार ११:४२:०० प्रकाशित
एजेन्सी– संसारमै सबैभन्दा ठूलो टाउको भएका भारतका एक बालकको सफलतापूर्वक शल्यक्रिया भएको छ।
भारतका सात महिने मृत्युन्जय दासको अस्वभाविक टाउकोको शल्यक्रिया भएको हो। उनी हाइड्रोसेफालसबाट पीडित थिए। उनको टाउकोबाट करिब चार लिटर तरल पर्दाथ निकालिएको छ। टाउकोमा जमेको तरल पर्दाथका कारण उनको टाउको खरबुजाको आकारभन्दा ठूलो थियो। ६ महिनाको उपचारपछि दासको टाउको ९६ सेन्टिमिटरबाट ७० सेन्टिमिटरमा झारिएको छ।
बालकलाई भुवनेश्वरस्थित एम्स अस्पतालमा नोभेम्बरमा भर्ना गरिएको थियो। अस्पतालका डा. दिलिप पारिडाले भने, ‘बालकको टाउकोभित्र साढे पाँच लिटर पानी छ।’
‘अहिलेसम्म ३ दशमलब ७ लिटर तरल पदार्थ निकालेका छौँ,’ डा. पारिडाले भने, ‘बच्चाको अवस्था स्थिर छ । राम्रो उपचार भइरहेको छ।’
बालकको अस्वभाविक टाउकोदेखि अभिभावक पीडित त छँदैछन् त्यो भन्दा अर्को पीडा उनीहरुलाई सामाजिक रुपमा वहिस्कार गरिएको छ।
‘भूत’जस्तो बच्चा जन्माएको भन्दै बच्चाका अभिभावक कमलेश दास र आमा कवितासँग छिमकी बोल्न मन पराउँदैनन्। ‘उसको अस्वभाविक स्वरुपदेखि छिमेकीले बच्चालाई भूत भन्छन्,’ कमलेशले गुनासो गरे। बच्चाको टाउकोको आकार घटेपछि समाजले स्वभाविक रुपमा हेर्ने उनको आशा छ।
के हो हाइड्रोसेफालस?
हाइड्रोसेफालस भनेको दिमागमा फ्लुड जम्मा हुनु हो। दिमागमा अत्यधिक तरल पर्दाथको दबाब बढ्न गई दिमागका तन्तुहरु नै हानी हुन सक्छन्। टाउको दुख्नु, बान्ता आउनु, द्वीविधा हुनु र हेर्न समस्या हुनु यो रोगका लक्षण हुन्।
गर्भवती अवस्थामा आमालाई संक्रमण भएमा वा कुनै बिरामी परेमा बच्चामा यस्तो समस्या हुन्छ। समयमा यसको उपचार नभएमा शारीरिक र मानसिक रुपमा अशक्त हुने खतरा हुन्छ जसका कारण स्थायी रुपमा दिमागको कोष बिग्रन्छ।